UpLead: Wulite Ezigbo B2B Prospect List Iji Mgbasa Ozi Ike na Mechie Ahịa | Martech Zone
E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na-ere ahịa si n’ebe ahụ na-agbasi mbọ ike ịzụta ndepụta maka ịchọta. Ma, n'ezie, enwere ezigbo ezigbo ihe kpatara ya:
ikike - atụmanya ndị a abanyebeghị na arịrịọ n'aka gị ka ị wee tinye aha gị egwu site na ịmegharị ha. Izipu ozi ị na-achọghị anaghị emebi iwu CAN-SPAM na United States ma ọ bụrụhaala na ị nwere usoro ịpụ apụ… mana a ka na-ahụta ya dịka ihe na-eme ihe ọjọọ.
Quality - e nwere ọtụtụ puku isi mmalite acrossntanetị na; dị mwute ikwu na, ọtụtụ n’ime ha bụ ndị mgbe ochie ma ọ bụ na-emezighị. N'ihi ya, mbọ ị na-arịọ onye nnata nwere ike ibute ọnụego nzaghachi dị egwu - ma ọ bụ ka njọ - aha email mebiri emebi.
Ntughari - ịkpọ oku ma ọ bụ ịkpọtụrụ email na ị nweghị mmekọrịta ọ bụla nwere ike imerụ aha ụlọ ọrụ gị ma mee ka a mara gị dị ka spammer.
Ndepụta Atụmatụ Nzuzo Bụ Norm, Ọ bụghị Nwepu
N'ime afọ iri gara aga, arụrụ m ọrụ na a ikike dabere na izipu ozi ịntanetị. Kwa ụbọchị, ndị otu anyị na - ebugharị anyị na - adụ ndị ahịa niile ọdụ mgbe ịzụta ndepụta ọ bụla na iji hụ na ha nyeere nhọrọ abụọ maka ndị debanyere aha email ọhụrụ. O buru na ikwuru ibubata a zụrụ ndepụta, ndị isi n’etiti ụlọ ọrụ baara gị mba. N'ime usoro mbubata, ị ga-enyocha igbe nke kwuru na ịzụrụ ndepụta ahụ.
Ihe nzuzo gbara ọchịchịrị, n'ezie, bụ na ndị otu ụlọ ọrụ ahụ na-ere ahịa ndepụta ndepụta maka ozi ịpụ apụ na ọkpụkpọ oyi azum kwa ubochi. Ha ka na - eme - edebeghi m aha n’elu ikpo okwu ha ọtụtụ oge n’ime afọ ma mesịa mechie na mkpọsa ọhụụ site n’oge ruo n’oge.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ndị otu ahịa niile ghọtara na ha na-eresị ndị ahịa na-azụ akwụkwọ nkwekọrịta email dị elu. Mgbe ị na-eme ego site na ịba ụba olu email… ị naghị echebara ebe ndị ahịa gị na-enweta adreesị email site na ogologo oge ị nwetaghị mkpesa SPAM.
Amaara m ụlọ ọrụ ole na ole nwere ọpụpụ na ịre ahịa ọpụpụ nke na-anaghị etinye kọntaktị oyi na atụmatụ azụmaahịa ha. Eziokwu dị mfe bụ na ịkpọ oku na email na-azụ ahịa edepụtara nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere ndepụta nke ogo kachasị elu, na-elekwasị anya n'atụmanya gị nke ọma, ma na-asọpụrụ na ị naghị agbanye ahịa ma ọ bụ na-eme mkpesa maka nzaghachi.
Etu ị ga - esi gbazuta ihe ịchere
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ime na-enweghị zụrụ atụmanya data, Ekwenyere m dị ka ahịa anyị niile ga-. Agbanyeghị, anyị maara na anyị kwesịrị ịga n'ihu atụmanya iji wulite mmata maka ụdị anyị - igbe igbe ozi email bụ ụzọ dị mma iji mee ya. Nke a bụ ndụmọdụ m banyere ịzụta atụmanya ịzụta:
Ndepụta Vetted - Data ziri ezi bụ gị nnukwu ihe ịma aka mgbe ọ na-abịa anatara. Ndepụta B2B na-atụgharị na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ka ndị mmadụ na-esi n'otu ụlọ ọrụ gaa ụlọ ọrụ. Ọrụ ndị ọrụ na-agbanwe mgbe niile ka ndị ọrụ na-esi n'ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. N'iji ndenye ndepụta nke nwere oge, data vetted sitere n'ọtụtụ ebe dị oke egwu.
Nkewa - Understandghọta ọnọdụ ala, njirimara igwe, na ọrụ na ọrụ nke atụmanya gị dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịre ha ahịa site na email. Ihe dị mkpa dị na atụmanya gị, nke ga-eme ka ị ghara ịdapụ na mmekọrịta ndị ahụ.
uru - winggha pọọsụ gị na iyi SPAM na-agaghị efu gị onye nnata email, ọ ga-emebi aha gị na aha gị. Nye uru na mgbakwunye ihe ndị ọzọ na ozi ịntanetị mbụ gị na atụmanya ma soro naanị mgbe enwere akara nke itinye aka.
Ndepụta Atụmatụ Atụmatụ Kwadoro
Kpochapụ na-enyocha data atụmanya ha site na usoro usoro 8, gụnyere ndekọ ọha, data nke ndị ọzọ nyere ikike, mmụta igwe, ule & nkwenye, nyocha oge, yana nzaghachi iji melite nchekwa data UpLead iji meziwanye ogo ahụ.
Dika ndi oru choputara, achoputala UpLead dika uzo mbu nke kachasi nma ma atule ya na ZoomInfo, D&B Hoovers na Clearbit. Ngwaahịa UpLead gụnyere:
Onye na-atụ anya ya - Chọọ ihe karịrị 54 nde profaịlụ dị mfe. Naanị ịhazi ọchụchọ gị site na iji ihe nzacha 50 iji chọta ndu nke kwekọrọ na profaịlụ gị kachasị mma. Wee nweta profaịlụ ha ka ịchọta ozi kọntaktị ha ma tinye aka na sekọnd.
Enwetara data - you nweela ebe nchekwa data gị? Bulite ya UpLead ma welie ya site na itinye 50+ mpaghara nke ozi kọntaktị zuru ezu na sekọnd.
Chọta Email - Nnukwu ihe nchọta email na-enye gị ohere ijikọ na ndị na-eme mkpebi dị mkpa gbasara gị.
Nkwenye email - Nyocha oge-oge maka adreesị ozi-e ọ bụla na ọnụego ziri ezi nke 95%. Nwere ike ịhọrọ ịkọ ọkọlọtọ ma zere iji ozi ịntanetị jidere.
Mgbatị Chrome - Mgbakwunye Chrome nke UpLead bụ ụzọ dị mfe iji chọta ụlọ ọrụ B2B na ozi kọntaktị na sekọnd.
Teknụzụ - Na-ewepụta ndepụta nke ndị ruru eru na-adabere na teknụzụ ndị ezigbo ndị na-azụ gị na-eji - ma ọ bụ na i jbeghị ya, na-etinye isi ihe data 16,000.
API - The UpLead API na-enye ụlọ ọrụ na kọntaktị data iji nyere aka bulie azụmahịa gị.
Na agbanyeghị ma ị bụ onye na-azụ ahịa na-achọ iwepụta ọtụtụ ụzọ maka ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ onye na-ere ahịa nke na-anwa ịbịakwute atụmanya dị mkpa, ị nwere ike ịdabere na UpLead iji mee ka ọ dị elu.
Bido nnwale efu na UpLead
Tags: b2b datab2b anatarab2b atụmanyadoro anyaNkemd & b gbanyedun na bradstreetnkà na ụzụgbasiezoominfo